ယောက်ျားများ - သင် Monogamy Spectrum ကိုဘယ်မှာရောက်မှာလဲ။ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
သင်၌လိင်ဆက်ဆံဖက်မည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ သင်သည်တွဲဆက်မှုအတွက်သင်ကြိုးချိတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာကိုရှာဖွေခြင်းမှအကျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ခြင်းသည်“ ပျော်ရွှင်စွာအစဉ်ခံစားရလိမ့်မည်” မဟုတ်ပါ ဆိုလိုတာက လူမှုရေးအရ monogamous: မေတ္တာ၌ကရြောကျဖို့စွမ်းရည်နှင့်အနည်းဆုံးအချိန်များအတွက်, Bond ဖို့အလိုဆန္ဒရှိခြင်း။ ဆနျ့ကငျြအများစုနို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ် bonobo chimps နှင့်ကြွက်ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း, သူတို့မိတ်များနှင့်အပေါ်ကိုရွှေ့။ ခြားနားချက်များများအတွက်အကြောင်းပြချက် ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာမုသား.
ငါတို့အတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်တွဲစပ်သောမျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်ဆက်လက်ပေါင်းသင်းခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်သောအရိပ်အမြွက်ပြသခြင်းကိုပြသပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောသဘာဝသံသရာတစ်ခုထက်မကတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေသောမိဘများထံမှကျွန်ုပ်တို့၏သားစဉ်မြေးဆက်သည်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ (လူသားစုံနှောင်ကြိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်မာသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်“ သင်၏ Sexy Brain” တွင်ကြည့်ပါ ပျော်ရွှင်မှု၏သံလိုက်အိမ်မြှောင်။ ) မည်သည့်ရိုကဲ့သို့ပင်, သို့သော်, ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင် (atypical တစ်ဦးချင်းစီ) ကအမြဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ရှိရာသိလား သငျသညျ အဆိုပါစုံတွဲကို-bonder ရောင်စဉ်အပေါ်ရှိပါသလဲ ထိုသို့ရောငျ့ရဲရှာတွေ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
ကျော်တစျထောငျအသက်-အလယ်တန်းသို့မဟုတ်အထက်စုံတွဲများ၏လတ်တလောစစ်တမ်းကိုစဉ်းစားပါ ကျူးလွန်, ရေရှည်ဆက်ဆံရေး ငါးနိုင်ငံကနေ။ သုတေသီများက“ ဒီလေ့လာမှုမှာပျော်ရွှင်မှုရဲ့အထွေထွေအဆင့်ဟာမြင့်တက်ခဲ့တယ်” ဟုဆိုသည်။ ဒီစုံတွဲတွေကဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ် (ဆိုလိုတာကတာရှည်ခံနိုင်တယ်) ။
လူတို့သညျအဘို့, တစ်ဖက်များကမကြာခဏနမ်းခြင်းနှင့် cuddling နှင့်မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခြော့တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးတို့ကဆက်ဆံရေးဟာပျော်ရွှင်မှုကိုသတင်းပို့၏လေးသာမှုတိုးလာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3၏အချက်။ (အထူးသဖြင့် ၃.၀ နှင့် ၃.၁၁ အသီးသီးအသီးသီးဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းသည် ၁.၅၉ နှင့် ၁.၃၅ သာဖြစ်သည်။ ) သုတေသီများကောက်ချက်ချခဲ့သည့်အတိုင်းကျားမအလိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်ခင်မှု၏အခန်းကဏ္ and နှင့်အဓိပ္ပါယ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့လူငယ်တွေတောင်မှဆက်စပ်မှုရှိခဲ့တယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထက်ရင်ခုန်စရာလှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမို သာယာသောအခွအေနေနှင့်အတူ။
ဆက်ဆံရေး Duration: ကိုလည်းကြားဆက်ဆံရေးပျော်ရွှင်မှုကိုအပေါ်သိသိသာသာများနှင့်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအနည်းပါးလာမိတ်ဖက်ခဲ့ကြသောယောက်ျား သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ တချို့ယောက်ျားတွေပဲ Are မယားအဘို့ကြိုး? တိုးချဲ့ရငျးနှီးစိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပါသလား? အမျိုးမျိုးနှင့်မကျေနပ်မှုများအကြားက link ကဘာလဲ? (ကယခုအချိန်တွင်အတွက်ပို။ )
မြင့်မားလိင်၏အော်ဂဇင်နှင့်ကြိမ်နှုန်းခဲ့ကြသည်တန်ဖိုးထားလေးမြတ် မဟုတ် ဆက်ဆံရေးဟာပျော်ရွှင်မှုတွေခိုင်မာတဲ့ခန့်မှန်း။ သို့သော်အားလုံးကျော်, နှစ်ဦးစလုံးအိမ်ထောင်ဖက် rated သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက် ပို. အရေးကြီးသောဦးစားပေးအဖြစ်အော်ဂဇင်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ရေရှည်တစီးကိုကျော်ရကျေနပ်တက်တွဲသောသူတို့အားဖြစ်ကောင်းတစ်ရက်ရက်ရောရောအတွေးအခေါ်တွေထက်ပိုသူ့ဟာသူ orgasm, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်, ချစ်ခင်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွသောထိတွေ့တန်ဖိုးထားဟန်နှင့်။
အဘယ်အရာကိုမ သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်သည်ကား, သင်တို့သည်ရှင်းလင်းစွာနားကြားကြသလော
မယားနှင့်ဖောက်ပြန်မကြာခဏရောငျ့ရဲသို့မဟုတ်အညစ်၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူပတျသကျ။ ဤရွေ့ကားခံစားချက်တွေကိုအဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်အတွင်းရှိအဆောက်အဦများ၏စရိုက်အုပ်စုတွင်ပေါ်ထွန်း ဆုလာဘ် circuitry။ သင် pair တစုံ-bonder ရောင်စဉ်အပေါ်ကရြောကျနေရာတိုင်း, ဘယ်လို သင်သည်သင်၏ကောင်းသောခံစားချက်တွေကိုသင်ကကြိုးဘယ်လောက်ဖျောပွနိုငျရ။ သငျသညျအဓိကအားဖွငျ့သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထွက်အသကျရှငျအာရုံစိုက်နေကြပြီး, ဝတ္ထုမိတ်ဖက်သင့်ရဲ့အကြီးမားဆုံး aphrodisiac ဖြစ်ကြသည်သင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ပါသည် အကယ်. riskier, hit-or-လွဲချော်လိင်အဘို့ကြိုး ရေရှည်စျမယားထက်။
ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာ, သင်သည်အဘယ်သူ၏အပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုပြင်းထန်သောအားဖြင့် numbed ထားပြီးတစ်စုံ bonder ဖြစ်နိုင်သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ-or ပင် စှဲမွဲမှု။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းတစ်ဦးအတွက် လေ့လာမှုအသစ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဘို့ propensity (အလွယ်တကူအများအပြားအစပျိုးခြင်းနှင့်အခြေအနေများအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံရမှု) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပျက်ကွက်ကိုကြောက်ရွံ့: အထီးဖောက်ပြန်၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဖွစျစနေို ရောဂါလက္ခဏာ overstimulation ၏။ သူတို့ဖြန့်ချိသောကွောငျ့အသစ်အဆန်းများနှင့်စွန့်စားပြီးနောက်အဖြစ်အသည်းအသန်လိုအပ် aphrodisiacs ပြုမူစေခြင်းငှါ အပို dopamine။ တခါ ဦးနှောက်ထဲမှာချိန်ခွင်လျှာ ပွနျလညျထူထောငျသညျ, အစွန်းရောက်ဆွမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဖြစ်လာ, နဲ့ content စျမယားအများကြီးပိုလွယ်သည်။
မည်သည့်အဖြစ်အပျက်၌, သင်ချစ်ခင်, sexy touch နှင့်နီးစပ်ပေါင်းသင်းအထူးသဖြင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ကျေနပ်တွေ့ပါလျှင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ မဟုတ် သင်အချိန်ကိုကျော်မျိုးစုံမိတ်ဖက်ရှိပါကအဆိုပါစုံတွဲကို-bonder ပင်ရောင်စဉ်-အပေါ်တစ်ဦးအညစ်ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်။ Pair ကို bonders သင်တန်း၏, လိင်ကိုးကွယ်ပေမယ့်သူတို့အဘို့အဖက်တုန့်ပြန်နှင့် Reception အထူးသဖြင့်ပျြောမှေ့စနှင့်အားရစရာဖြစ်ပုံရသည်။ ဤသည်အခြားစစ်မှန်သောဖြစ်ပေါ်လာသော pair တစုံ-Bond မျောက်ဝံများ အဖြစ်ကောင်းစွာ။
အထက်ဖော်ပြပါရေရှည်စုံတွဲများကဲ့သို့မင်းကိုကြိုးချိတ်ထားပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်သင်သည်ယနေ့ယဉ်ကျေးမှုတွင်ရှင်သန်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့လိုခြင်းကဲ့သို့သောတွဲဖက်အားသာချက်များသည်ယနေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာစံအကြံဥာဏ်ကသင့်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ပေးနိုင်တဲ့နေရာလေးခုကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ 'ကောင်းရင်လုပ်ပါ' 'စွဲလမ်းစေနိုင်သည်
မယုံပါနှင့်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်အလွန်ခိုင်မာသောအတွဲနှောင်ကြိုးဝါယာကြိုးများရှိပါက၊ အွန်လိုင်း erotica ပေါ်တွင်သာမကအခြားအရာများနှင့်ပါချိတ်ဆက်ရန်အထူးသဖြင့်အားနည်းနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်ဇီဝဗေဒဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အမင်းပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုသည်တွဲဆက်မှုနှောင်ကြိုးကိုအားပေးရန်ဖြစ်ပေါ်သောအလွန် ဦး နှောက်ယန္တရားကို“ ပြန်ပေး” နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တွဲစပ်မှု (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသ) voles များသည်အထူးသဖြင့်သွားနိုင်သည် စွဲလမ်းစေတ္ထုများ (Non-pair တစုံ-Bond voles မတူပဲ) ။ သေး တွဲ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ရှိ မူးယစ်ဆေးအတွက်အကျိုးစီးပွားမပါ။ bonder တစ်ခု၏ဆုကွင်းဆက်တွင်“ အပေါက်သေးသေးလေး” တစ်ခုရှိသည် (ဥပမာလူတစ်ယောက်ဘယ်တော့မှချည်နှောင်ခြင်းမရှိသည့်တိုင်) နှောင်ကြိုးတစ်ခုဖြင့်ဖြည့်ရန်အော်ဟစ်နေသည့်အလား
ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောပြည်ထောင်စုမရှိခြင်းကြောင့်အချို့သောအနှောင်အဖွဲ့များသည်ထိုအပေါက်ကိုဖြည့်ရန်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဆုပ်ကိုင်လိမ့်မည်။ အချို့သူတို့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်မဟုတ် များမှာ pair တစုံ bonders သူတို့မေတ္တာအစားထိုးအရှုံးမပေးအထိပါပဲ။ အဖြစ်တဦးတည်းကောင်လေး said:
ရည်မှန်းချက် - လာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွင်းမှာအားကိုးအားထားပြုထိုက်သော cuddle-buddy ကိုရယူပါ။ ဒါဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါကဒဏ်ငွေ ရုံ TLC အချို့ချင်တယ်။ ဘုရားသခင်ပြောတာကဒီလိုမျိုးစကားပြောရတာအရမ်းကွာခြားပါတယ်။ လူတွေဟာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာကြောင့်လုံးဝနက်ရှိုင်းစွာခံစားခဲ့ရတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာ ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့ weirdo တစ်ယောက်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုငါသူတို့ထဲကတစ် ဦး သို့လှည့်။
စကားမစပ်, တစ်စုံ-bonder ဦးနှောက်သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်အလိုရှိပါလျှင်ပင်, တစ်ဦးညစ်ညမ်းမိန်းမဆောင်လက်လွှတ်ဖို့ကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့စေနိုင်သည်။ အခြားကောင်လေး said:
သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်သည်နောက်တဖန်သူတို့ကိုကြည့်ဖို့ဘယ်တော့မှ, သူအပေါငျးတို့မိန်းကလေးတွေမှနှုတျဖြစ်ကြောင်းလက်ခံရန်ရှိပါတယ်! ဒါဟာသင်, ဝမ်းနည်းဖွယ်မျက်တော် ထွက်. , စိတ်ဆင်းရဲ, စိတ်ဓာတ်ကျ, ငရဲအဖြစ် horny, ထုံ, null-အဲဒါကိုသိပ်သူတို့ကိုချစ်သောကြောင့်, သင်ပြန်သင့်ရဲ့မိန်းမဆောင်ကိုသွားရငရဲ၏အဆိုးဆုံးအမျိုးမျိုးအားဖြင့်သင်တို့ဆွဲယူဖြစ်စေမည်။ [Pair ကို-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီး voles တဲ့အခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲ၏တူညီသောမျိုးကိုပြသ အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှကွဲကွာ.]
ထို့နောက်သင်သည်ရည်းစားတစ် ဦး နှင့်ပြိုကွဲသွားသကဲ့သို့ (ကောင်းစွာ၊ တူညီသည်၊ အမှန်မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်) ကဲ့သို့တစ်နေ့တွင်သင်နိုးထပြီးအဖျားပျောက်သွားသည်။ ဦး နှောက်က“ အိုကေ။ ငါရပြီ။ sniff * ။ ငါгарတောင်တကယ်ထွက်သွားပြီထင်ပြီးသူတို့ကိုနောက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ပါ။ * sniff * ... ဟေ့ - ဘဏ်မှာတန်းစီစောင့်နေတဲ့မိန်းမကချစ်စရာကောင်းတယ်။ ဟေးကလေး!" သင်တို့သည်အနာရောဂါကင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ [မကြာမီသူသည်အတိတ်ကာလကသူချစ်သောအမျိုးသမီးနှင့်ပေါင်းသင်းခဲ့သည်]
2 ။ တစ်ကိုယ်တော်လိင်လမ်း Down နည်းကျေနပ်မှုထုတ်လုပ်နိုင်ပါစေ
pair တစုံ bonders connection ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းထံမှရသောအစွမ်းထက်ကောင်းသောခံစားချက်များကိုပေးသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသူတို့ရဲ့လဒ်တိုးမြှင့်ဖို့တစ်ကိုယ်တော်လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အိမ်ထောင်ဖက်အားပေးအားမြှောက်နာမည်ကျော်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုရလဒ်များကိုနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားခဲ့ရထို့ကြောင့်ရံဖန်ရံခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့သူကိုတဦးတည်းခင်ပွန်း, ကြိုတင်သူ၏ဇနီးနှင့်အတူအားလပ်ရက်ဖို့သုံးလအဘို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံမှု၏လေးဖြောင့်ရက်အကြာမှာသူကဆိုသည်:
ဒါကအခြားအရာတစ်ခုကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲငါပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော့်ဇနီးကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်ယခုအလှည့်ပါတကား! ငါအတိတ်ကာလ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်မျှော်လင့်ထားကြလိမ့်မယ်။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတက်စက္ကန့်ရဲ့အသိပေးစာမှာသွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်ကြောင်းယူဆတယ်။ လှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုငါကြည့်တိုင်းအချစ်ပိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ အခုငါမျှော်လင့်တာကငါကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် (ဆိုလိုတာကကျွန်တော့်ဇနီး) ရှေ့မှာအေးအေးဆေးဆေးနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာသူဖြစ်လာမှာပါ။
ပထမညမှာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့စကားစမပြောခင်အထိကျွန်တော့်စိုက်ထူမှုပေါ်ပေါက်လာသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့လိင်စိတ်ကိုတစ်နေ့လုံးအနည်းငယ်“ ခံစားရသည်” စတင်ပြီ။ ငါရောဂါပျောက်ကင်းတယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ ငါ့ပြproblemနာကစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပေါင်းစပ်မှုလို့ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့် ၄ ရက်ဆက်တိုက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်ဟုကျွန်ုပ်အားမယုံကြည်ပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။
(၃) Cuddle Buddies များသည် Hook-ups များထက် ပို၍ အကျိုးရှိနိုင်သည်
Pair bonders များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာထိတွေ့မှုနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်စေ၊ ထို့ကြောင့်, ဆက်ဆံရေးအကြား၌ "cuddle သူငယ်ချင်းများအွန်လိုင်းအွန်လိုင်းခေါ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ စမ်းသပ်ခဲ့သူယောက်ျားလေးစုံတွဲတစ်တွဲပြောခဲ့သည်
ငါအခု snuggle ရဲ့ buddy ရှိသည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အတူတကွကြည့်ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကိုင်ထားသည်။ ဖိအားမရှိတဲ့အခြေအနေကောင်းတယ်။ ထိုအခါငါတကယ်ပြောဖို့ရှိသည်, အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတွေ porn ထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ အရမ်းကောင်းတယ် ငါထင်တာကငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာတပ်မက်ခဲ့တာပါ။ သူမလုပ်ချင်တာအတိုင်းငါလုပ်ချင်တာကိုသိရခြင်းကစိတ်သက်သာရာရစေသည်။
ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် (နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်) ခွင့်ပြုသည့်နှေးကွေးသောပိုးပန်းရန်အတွက်အရံနှောင်ကြိုးအချို့ကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရှင်းပြသည်မှာမေတ္တာတော်၌တည်နေရန်ပျင်းရိ Way ကိုဦး နှောက်၏တွဲစပ်မှုယန္တရားသည်စောင့်ရှောက်သူများ - မွေးကင်းစနှောင်ကြိုးမှတဆင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခြင်း၊
သင်တန်း၏, လူတခြို့အခြားသူများထက်ကို attachment တွေကိုလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။ တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်မိတ်ဆွေတစ်ပြောခဲ့သကဲ့သို့,
မိခင် - သားသမီးနှောင်ကြိုးအတွက်ကန ဦး ရွေးချယ်ထားသည့် ဦး နှောက်ယန္တရားများကိုသားများကအညီအမျှအမွေခံခဲ့ကြပြီးအမျိုးသား - အမျိုးသမီးနှောင်ကြိုးနှင့်ဖခင် - နှောင်ကြိုးတို့ကိုအားပေးခဲ့သည်။ ထိုစရိုက်များကိုအမျိုးသားများတွင်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်းရွေးချယ်မှုအရလူတို့တွင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤနှောင်ကြိုးများမရှိဘဲအထီးမျိုးရိုးဗီဇကြံ့ခိုင်မှုသည်အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးအထိအောင်မြင်နေဆဲဖြစ်သည်။
4 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှုစိတ်ခံစားမှု Connection ကိုမှ Related ခံရနိုင်ပါစေ
ဒီ post ရဲ့အစပိုင်းမှာအကျဉ်းချုံးစုံတွဲလေ့လာတွေ့ရှိချက်မှာဖျောပွထားပါနှင့်အမျှတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှုအတွက်အလိုဆန္ဒသူက likes သို့မဟုတ်မတစ်စုံ bonder-ရှိမရှိညာဘက်ဦးနှောက်ဓာတုဗေဒသို့ built နိုင်ပါသည်။ ဒီလူတွေ၏သဘောထားမှတ်ချက်ကိုစဉ်းစားပါ:
အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ခဏတာပါဝင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုကိုမပြုလုပ်လိုပါ။ ငါ polyamory မှာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငါဟာတစ်ညတည်းရပ်တည်နေတဲ့ကောင်လေးမဟုတ်ဘူး။
ငါနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိနေသောအခါသူတို့အနားတွင်စိုက်ထူမှုတစ်ခုရနိုင်သည်။ သို့သော်ငါနှင့်အတူမရှိခဲ့ဘူးသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူငါဖွင့်ခံစားရတယ်။ ငါနှင့်စကားပြောသောအခါသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူကခုန်သောအခါငါလိင်တံ၌အချို့သောခံစားချက်ရဖို့အလုပ်လုပ်ရတယ်။
ယနေ့ခေတ်ပတ် ၀ န်းကျင်သည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ငွေချေးစာချုပ်များအတွက်တည်မြဲသောကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတွက်သူတို့၏လမ်းရှာရန်ခက်ခဲစေသည်။ သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဆက်သွယ်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရောင်းဝယ်မှုလျှော့ချခြင်းအတွက်ကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ထားပါကပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့လူသိများသောအကြံပေးချက်သည်သင့်အတွက်အကျိုးမရှိပါ။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကမင်းကိုဗလာကျင်းနေစေနိုင်တယ်၊ မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ် စွဲ-related ပြဿနာများ.
မည်သို့ပင်အခြားသူတွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို၏, တိုးပွါးသောအရာကိုအထဲကရှာတွေ့ သင့်ရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုများအသိ။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင့်ဦးနှောက်ကို restore ပုံမှန် sensitivtiy ရန်။ ထွက်ရောက်ရှိ စစ်မှန်သော အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်။ သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုပိုမို touch နှင့်ချစ်ခင်အလေးပေးကြိုးစားပါ။ အလွန်ပွော့? သို့ဆိုလျှင်ကွန်နက်ရှင်အရေးကြီးသောနည်းလမ်းတွေ၌သင်တို့၏သာယာဝပြောရေးတိုးတက်အောင်နိုင်ပါသည်။ တယောက်သောသူက,
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မနှစ်ဦးစလုံးမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများအတွက်ဆေးဝါးယူပါ။ လတစ်ဦးကစုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်များကိုဆင်းလာမယ့်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါယခင်အဆင့်¼ငါ့ဆေးဖြတ်ကြပြီ သူမ၏ doc ရုံသူမသည် meds drop နိုင်ပါတယ်သူမ၏သို့ပြောသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာလအနည်းငယ်အကြာကျနော်တို့၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့် Bond အပြုအမူတွေ။ ငါညစဉ်ညတိုင်းသူမတစ်ဦးခြေလျင်နှင့် / သို့မဟုတ်နောက်ကျောနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ငါဆွဲထုတ်ငါ၏အခွေး-eared ၏မိတ္တူကိုမီးမောင်းထိုးပြ Cupid ရဲ့အဆိပ်သင့် Arrow။ သေချာတာပေါ့၊ စာမျက်နှာ ၂၁၆ မှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ် -“ အနှိပ်နှင့်အခြားဂရုစိုက်တတ်သောထိတွေ့မှုသည်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောဟော်မုန်းများနှင့် သွေးပေါင်ချိန်"ပေးသူအဘို့," ပုံရသည်။
သငျသညျစမ်းသပ်လျှင်, သင်, အသိအမှတ်မပြုဘို့တောင်းနှင့်အပြုအမူကယ်နှုတ်တော်မူရန်သင်ယူပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်သည်အမှန်တကယ်အမြင့်ဆုံးကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များတွင်မည်သည့်အရည်အသွေးများကိုစောင့်ကြည့်ရမည်ကိုလည်းသင်သိလိမ့်မည်။ (ပြီးတော့အတိတ်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဘာကိုခွင့်လွှတ်ရမလဲ။ ) သင့်အတွက်မှန်ကန်ရာကိုရှာဖွေခြင်းသည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဖြစ်ကောင်းပင်များအတွက် အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်.
တိုတောင်းတဲ့ Watch pair တစုံဘွန်း၏ neurochemistry ဗီဒီယို
ဖတ် အသက် ၂၃ - (ED) ၇ လ - တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးလိုအပ်သည်
သုတေသန: မီးယပ်သားဖွားအမျိုးသားများအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများသည်ဆက်စပ်မှုအခြေအနေများ (၂၀၁၇)